19ỤLỌ * 12W LED Focus Moving head light - ỤLỌ & Onye nrụpụta
ỤLỌ ỤLỌ Ngwaahịa ỤLỌ 19ỤLỌ * 12W LED Focus Moving head light
19ỤLỌ * 12W LED Focus Moving head light
Working lifetime: 100,000 Igwe ọkụ isi 350w na-akpụ akpụ nwere mmetụta fotosensitivity siri ike yana mmetụta atomization mara mma
Beam angle: 8-50Ngwaahịa
Ngwaahịa: L43*W31*H41 cm
7.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile : ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile 2 ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile , ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile .
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : Do you have any MOQ limit for order?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , then you need to pay the freight to us .（Specific details need us to talk in detail）
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : 12. ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị?